Terms uye Mamiriro ane WPSOLR
musha » Terms uye Conditions
Yakagadziriswa: April 03, 2015
Aya maMitemo uye Maitiro ("Mitemo", "Mitemo uye Mamiriro") anotonga hukama hwako ne https://www.wpsolr.com/ webhusaiti (iyo "Sevhisi") inoshandiswa naEostis SARL ("isu", "isu", kana "Vedu").
Ndapota verenga Aya neMitemo usati washandisa Service.
Kuwana kwako uye kushandiswa kweBasa kunogadziriswa pakugamuchirwa kwako nekuteerera neMitemo iyi. Aya Magwaro anoshanda kune vose vashanyi, vashandisi nevamwe vanogona kuwana kana kushandisa Sangano.
Nokusvika kana kushandisa Sangano unobvumirana kuva akasungwa neMirairo iyi. Kana iwe usingabvumirani nechinangwa chipi zvacho chemashoko iwe unogona kunge usingawani neHurumende.
Kana iwe uchida kutenga chero chigadzirwa kana sevhisi yakaitwa kuti iwanikwe kuburikidza neSevhisi ("Kutenga"), unogona kukumbirwa kuti upe rumwe ruzivo rwakanangana neKutenga kwako kusanganisira, pasina muganho, kiredhiti kadhi kiredhiti, zuva rekupera kwekadhi rako rechikwereti, kero yako yekubhadharisa, uye nerako ruzivo rwekutumira.
Iwe unomiririra uye unofunga kuti: (i) iwe une kodzero yepamutemo yekushandisa chero kadhi rechikwereti (s) kana imwe nzira yekubhadhara (s) maererano nekutenga kupi zvako; uye kuti (ii) ruzivo rwaunopa kwatiri nderechokwadi, rwakarurama uye rwakakwana.
Nokukupa ruzivo rwakadaro, iwe unotipa kodzero yekupa ruzivo kuvanhu vatatu kuitira chinangwa chokugadzirisa kupedzisa kwekutenga.
Tinochengetedza kodzero yekuramba kana kubvisa urongwa hwako panguva ipi zvayo nekuda kwezvikonzero zvikabatanidza asi zvisingarevi kune: chigadzirwa kana kushandiswa kwebasa, kukanganisa mukutsanangurwa kana mutengo wechigadzirwa kana basa, kukanganisa mukuraira kwako kana zvimwe zvikonzero.
Isu tine kodzero yekuramba kana kudzima kodhi yako kana hunyengeri kana basa risingabvumirwe kana zvisiri pamutemo rinofungidzirwa.
Kuwanikwa, Zvikanganiso uye Inaccuracies
Tiri kugara tichivandudza zvipo zvedu zvemiti nemishandiro paNhare. Zvigadzirwa kana maitirwo anowanikwa paTe Service yedu angave asina kukodzera, anorondedzerwa zvisina kururama, kana kuti haawanikwi, uye tinogona kutora kunonoka pakuvandudza ruzivo pamusoro peBasa uye pakushambadzira kwedu kune mamwe mawebvu.
Hatigone uye hatiiti kuvimbika kana kukwana kwemashoko chero ose, kusanganisira mitengo, zvigadzirwa zvemifananidzo, zvinyorwa, kuwanika, nemabasa. Tinochengetedza kodzero yekushandura kana kuvandudza ruzivo uye kugadzirisa zvikanganiso, zvisingabvumirwi, kana kusvibiswa panguva ipi zvayo pasina chiziviso chisati chaitika.
Zvimwe zvikamu zveSevhisi zvinobhadhariswa pachinyoreso hwaro ("Kunyorera (s)"). Iwe unozobhadhariswa pamberi pekudzokororwazve uye nguva nenguva hwaro ("Kubhadharisa Kombiri"). Maitiro ekubhadharisa akaiswa chero pamwedzi kana pagore, zvinoenderana nerudzi rwekunyorera chirongwa chaunosarudza kana uchitenga Kunyorera.
Panopera yega yega Bhiri Bhiriji, Chinyoreso chako chinobva changozvivandudza pasi pemamiriro ezvinhu akaenzana kunze kwekunge uchichibvisa kana Eostis SARL ichichikanda. Iwe unogona kukanzura yako yekunyoresa patsva kunyangwe kuburikidza newepamhepo account management peji kana nekubvunza Eostis SARL vatengi timu yekutsigira.
Nzira yekubhadhara inoshanda, inosanganisira kadhi rechikwereti kana PayPal, inodikanwa kugadzirisa mubhadharo weKunyoreswa kwako. Iwe unofanirwa kupa Eostis SARL ruzivo rwakakwana uye rwakazara kubhadharisa kusanganisira zita rakazara, kero, nyika, zip code, nhamba yefoni, uye nzira yekubhadhara yakavimbika. Nekutumira ruzivo rwakadaro rwekubhadhara, iwe unongopa mvumo Eostis SARL kubhadharisa zvese Zvekubhadhara mari inobhadharwa kuburikidza neakaundi yako kune chero akadai ekubhadhara michina.
Kana bhizimusi rekuzvitakura rikatadza kuitika nekuda kwechikonzero chero chipi, Eostis SARL inoburitsa invoice yemagetsi inoratidza kuti iwe unofanirwa kuenda nemaoko, mukati meimwe nguva yekupedzisira, nemubhadharo uzere unoenderana nenguva yekubhadhara sezvakaratidzwa painvoice.
Eostis SARL, mukufunga kwayo uye chero nguva, inogona kugadzirisa iyo yekubhadhara yemari yekuBhadhara. Chero chero Chekubhadhara mutero shanduko chichava chinoshanda pakupera kweiyo-yazvino Bhiri Bhiriji.
Eostis SARL inokupa iwe ziviso yakamberi yekuzivisa chero shanduko muKunyoresa mari yekubhadhara kuti ikupe mukana wekumisa kunyoresa kwako kunyorwa kusati kwaitika.
Kuenderera mberi kwako kushandiswa kweBasa mushure mekushandurwa kwemari yekubhadharisa kubhadhara kunogadzira chibvumirano chako chekubhadhara chikamu chekubhadharisa chekubhadhara mari.
Kunze kwekunge zvichidikanwa nemutemo, mari yekubhadhara yakabhadharwa haidzorere.
Yedu Sevhisi inokutendera iwe kuti utumire, kubatanidza, kuchengeta, kugovana uye neimwe nzira kuita kuti uwane rumwe ruzivo, zvinyorwa, mifananidzo, mavhidhiyo, kana zvimwe zvinhu ("Zvemukati"). Iwe une basa reChinyorwa chaunotumira kuSevhisi, kusanganisira hunhu hwayo, kuvimbika, uye kukodzera.
Nekutumira Zvemukati kuSevhisi, iwe unotipa iwo kodzero uye rezinesi rekushandisa, kushandura, kuita pachena, kuratidza pachena, kubereka, uye kugovera maCustomer akadaro uye kuburikidza neSevhisi. Iwe unochengetedza chero nekese kodzero dzako kune chero Chinyorwa chaunotumira, kutumira kana kuratidza pa kana kuburikidza neSevhisi uye iwe unozvidavirira kuchengetedza iwo kodzero. Unobvuma kuti rezinesi iyi inosanganisira kodzero yekuti isu tipe kuti Vashandisi Vako vashandiswe kune vamwe vashandisi veSevhisi, vangangoshandisa Chinyorwa chako pasi penyaya izvi.
Iwe unomiririra uye waranti kuti: (i) Zviri mukati ndeyako (iwe ndiwe wayo) kana une kodzero yekuishandisa uye tipeiwo kodzero uye rezinesi sezvakapihwa mune aya Mugovera, uye (ii) kutumira kweZvauri pamusoro pa kana kuburikidza neSevhisi hazvityore kodzero dzekuvanzika, kodzero yeruzhinji, copyright, kodzero dzechibvumirano kana chero kodzero dzemumwe munhu.
Paunenge uumba kambani nesu, unofanira kutitumira ruzivo rwakarurama, rwakakwana, uye rwemazuva ose. Kukundikana kuita izvi kunoputsa kukwidza kweMitemo, iyo inogona kukonzera kuguma kwekambani yako pakarepo pabasa redu.
Iwe unofanirwa kuchengetedza password yaunoshandisa kuti uwane iyo Service uye nokuda kwemabasa chero ipi zvayo kana zviito pasi pephasiwedi yako, ingave password yako ine basa redu kana chebasa rechitatu.
Unobvumirana kuti usazarura password yako kune ani zvake wechitatu. Iwe unofanira kutitaurira pakarepo paunenge uchiziva kukanganisa kupi zvako kwekuchengetedzwa kana kushandiswa kusina mvumo kwekombi yako.
Iwe haungashandisi sezita rezita zita romumwe munhu kana sangano kana izvo zvisingabvumirwi zviri pamutemo kuti zvishandiswe, zita kana kuti yebhizimisi iyo inotungamirirwa kune kodzero ipi zvayo yemumwe munhu kana imwe sangano kunze kwako pasina kubvumirwa kwakakodzera, kana zita zvinopesana nezvimwe, zvinosvibisa kana zvinonyadzisa.
Iyo Service uye yayo yekutanga yezvinyorwa (kunze kweiyo Yakapiwa nevashandisi), maitiro uye mashandiro aripo uye acharamba ari ega ehupfumi midziyo yeEostis SARL nevanopa marezenisi. Iyo Service yakachengetedzwa nekopiraiti, chiratidzo, uye mimwe mitemo yeFrance uye yekune dzimwe nyika. Zvigadzirwa zvedu zvekutengesa uye zvekupfeka zvekutengesa hazvigone kushandiswa zvine chekuita nechero chigadzirwa kana sevhisi pasina mvumo yakanyorwa yekutanga yeEostis SARL.
Mazano kune dzimwe nzvimbo dzeWebhu
Service Yedu inogona kuve neinobatanidza kune wechitatu-bato webhusaiti webasaiti kana masevhisi asiri ayo kana anodzora neEostis SARL.
Eostis SARL haina kutonga pamusoro, uye inotora hapana mutoro we, izvo zviri mukati, zvirongwa zvakavanzika, kana zviitwa chero yechitatu yewebhu webhusaiti kana masevhisi. Iwe unowedzera kubvuma uye kubvuma kuti Eostis SARL haizove nemutoro kana mhosva, zvakananga kana zvisina kunangana, kune chero kukuvara kana kurasikirwa kwakakonzerwa kana kufungidzirwa kukonzerwa kana kune chekuita nekushandiswa kana kuvimba nechero chipi zvacho chakadai, zvinhu kana masevhisi anowanikwa pane kana. kuburikidza chero newebhu saiti kana masevhisi.
Tinokukurudzira zvikuru kuti uverenge mitemo uye mamiriro ehurumende nemitemo yega yega yebato mawebhu kana mashumo aunoshanyira.
Isu tinogona kugumisa kana kusimamisa konti yako pakarepo, pasina chiziviso chisati chaitika kana chekuita, pane chero chikonzero chipi nechipi, kusanganisira pasina kuregererwa kana iwe ukaputsa Magwaro.
Pakuguma, kodzero yako yekushandisa iyo Service ichapera pakarepo. Kana uchida kupedza akaunti yako, unogona kungorega kushandisa Sangano.
Hakuna chiitiko chinofanirwa kuita kuti Eostis SARL, kana vatungamiriri vayo, vashandi, vanobatika, vamiririri, kana vanobatidzana, vapihwe mhaka kune chero zvisina kunanga, zviitiko, zvakakosha, zvakakanganisika kana kukuvara kwakakanganisa, kusanganisira pasina muganho, kurasikirwa kwepundutso, dhata, kushandiswa, kufarirwa , kana kumwe kurasikirwa kusingagoneki, kunokonzerwa (i) kwako kuwana kana kushandisa kana kusakwanisa kuwana kana kushandisa Service; (ii) chero maitiro kana zvirimo zvemunhu wechitatu paBasa; (iii) chero zvirimo zvakawanikwa muBasa; uye (iv) kuwana zvisiri pamutemo, kushandisa kana kushandura zvawakatumira kana zviri mukati, kungave kwakavakirwa pawaranti, chibvumirano, kurwiswa (kusanganisira kusaita hanya) kana chero imwe pfungwa yepamutemo, kunyangwe isu kana isu takaziviswa nezve mukana wekukuvara kwakadaro, uye kunyange kana mushonga wakarongwa apa unowanikwa ukatadza basa rakakosha.
Kushandisa kwako kweSevhisi kuri panjodzi yako wega. Iyo Service inopihwa pane "AS IS IS" uye "SEZVINOGONESA" hwaro. Iyo Service inopihwa pasina warranties yeanenge chero mhando, ingave inotsanangurwa kana kutaurwa, kusanganisira, asi isina kuganhurirwa, inofungidzirwa warranties yekutengesa, kurongeka kwechinangwa chakati, kusakanganisa kana nzira yekuita.
Eostis SARL matsigiro ayo, vamiririri, uye marezinesi ake haabvumiri kuti a) Sevhisi ichashanda isina kuvharwa, kuchengetedzeka kana kuwanikwa chero nguva chero nguva; b) chero zvikanganiso kana urema zvichagadziriswa; c) Sevhisi yacho haina mavairasi kana zvimwe zvinhu zvinokuvadza; kana d) mhedzisiro yekushandisa Service inozadzisa zvaunoda.
Iyi Midemo inofanirwa kutongwa uye kuverengerwa maererano nemitemo yeFrance, pasina kutarisana nekupokana kwayo kwezvemitemo zvinopihwa.
Kukundikana kwedu kusimbisa kodzero ipi neipi kana kupa kweMitemo iyi hazvizoiti sekuregererwa kwekodzero idzodzo. Kana chero urongwa hweMitemo iyi hunoonekwa kuti husina kuvhiringidza kana kusingatenderwi nedare, zvigadziriswa zveMitemo iyi zvicharamba zviripo. Aya Magwaro anoita chibvumirano chose pakati pedu pamusoro pebasa redu, uye kusimudzira uye kushandura chero zvibvumirano zvatingava nazvo pakati pedu maererano neSebasa.
Tinochengetedza kodzero, pane kungonzwisisa kwedu chete, kuchinja kana kugadzirisa Magwaro aya chero nguva. Kana kudzokorora kuve zvinhu tichaedza kugovera zvishuvo zvezuva re30 asati asvika chero mazwi matsva anobata. Chii chinoreva kuchinja kwezvinhu kuchagadziriswa pamusana pekuchenjera kwedu chete.
Nokuramba tichiwana kana kushandisa Shanduro yedu mushure mekunge zviitiko zvekushandurwa zvikabudirira, unobvumirana kusungwa nemashoko ekuvandudzwa. Kana iwe usingabvumirani nemashoko matsva, tapota tisa kushandisa Sangano.
Kana uine mibvunzo pamusoro pemitemo iyi, tapota taura nesu.